#FinancialGoals2021 Initiative | 2021 မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေရန် သင်၏ အစီအစဉ်ကို မျှဝေပါ | HIVE and LEO Prizes
2020 ခုနှစ်သည် ရူးနှမ်းခဲ့ရသော နှစ်တစ်နှစ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ Hive Fork မြှင့်တင်ခဲ့တာ ရှိခဲ့ပါတယ်၊၊ Corona virus ၏ ခြိမ်းခြောက်ခံရဆဲဖြစ်ပြီး US Federal Reserve က ငွေပမာဏများကို ပုံနှိပ်ခဲ့တယ်။ လူအများအပြားသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်က ယင်းကို မစောင့်ရှောက်မထိမ်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သလို ငွေကြေးပြဿနာများ ကြုံခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်တော် Hive အသုံးပြုသူများကို 2021ခုနှစ်အတွက် ငွေရေးကြေးရေး အစီအစဉ်ကို လုပ်‌ရန်နှင့် Financial Goal များကို ချမှတ်စေချင်ပါတယ်။
• ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် သင့်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဟာဗျူဟာက ဘာဖြစ်မလဲ။
• သင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသော သီးခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ ရှိပါသလား။
• ပိုမိုနှစ်သက်‌သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက ဘာလား။ Crypto, Real State, Commodities, Stocks?
• သင်၏ အစုရှယ်ယာကို မည်သို့တိုးချဲ့ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင် အစီအစဉ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ရည်မှန်းချက်များ ထားရှိပါသလား။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Hive နှင့် LEO တို့၏ စျေးနှုန်းအတွက် သင်၏ခန့်မှန်းချက်ကို မျှဝေပါ။
ကျွန်တော်က ဒီအစီအစဉ်ကို @LeoFinance နှင့်အတူ ထောက်ပံ့ပါတယ် ။ ဒီဟာက @tripode ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း နှင့်အတူ @aliento နှင့် @hispapro တို့က စီစဉ်ခြင်း နှင့် တိုးမြှင့်ပေးခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
• စာမူအပြည့်အစုံကိုရေးပါ (သို့) ၂၀၂၁ အတွက် သင်၏ အစီအစဉ်နှင့် ‌ငွေရေးကြေးရေး ရည်မှန်းချက်များကို Video မျှဝေပါ။
• ရေးသားထားသော စာမူပို့စ်များကို LeoFinance.io UI မှ တင်‌ရပါမည် ။ ဗီဒီယိုပို့စ်များကို 3Speak.com သို့ တင်၍ LeoFinance Community သို့ မျှဝေနိုင်သည်။
• သင်၏ Hive ပို့စ် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုတွင် #financialgoals2021 tag ကို ပထမလေး tags အတွင်း တစ်ခုအနေဖြင့် ထည့်ပေးရပါမည်။
• မှတ်ချက်များနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများသည် ဤပဏာမခြေလှမ်းအတွက် အလွန်အရေးကြီးပြီး Upvotes နှင့် ဆုများရရှိရန်အတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ LeoFinance UI တွင် ပြုလုပ်သော မှတ်ချက်များကို ပိုမို၍ ဦး စားပေးပါလိမ့်မည်။
• သင်၏ တင်ပို့ချက်ကို Twitter တွင်မျှဝေပြီး #HIVE , # FinancialGoals2021 , #LeoFinance နှင့်သင့် တင်ပို့ ချက်နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား hashtag များကိုသုံးပါ။
ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်၏ တာဝန်ရှိသူများကို သင်၏ ရေးသားချက်ကို မြင်ရစေနိုင်ပါသည်။
• Twitter တွင် သင်၏ HIVE Link ကို မှတ်ချက်ပေးပါ။ Twitter သည် Hive link များနှင့် 3speak လင့်ခ်အချို့ကို shadowbanning လုပ်တတ်သည်။ သို့သော် သင်၏ comment section တွင် ထည့်သွင်းထားပါက Twitter သည် သင်၏ tweet ကိုအရိပ်မချန်နိုင်ပါ။
• ဗွီဒီယိုတစ်ခု လုပ်တဲ့အခါ၊ Short Clip ကို Twitter အဖြစ် တင်ပြီး သင်၏ Link ကို Twitter post အောက်မှာ မှတ်ချက်တစ်ခု အဖြစ် ပေးလိုက်ပါ။ Twitter သို့ တိုက်ရိုက်တင်ပါက ဗွီဒီယိုများသည် မြင်ကွင်းများစွာရရှိပြီး ကျန်အပိုင်းများကို ကြည့်လိုလျှင် သင်၏ 3speak ပရိုဖိုင်း သို့ သွားရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးစာမူများကို ကျွန်ုပ်၏ Account နှင့် @leo.voter မှ ကြီးကြီးမားမား Vote ပေးဖို့ ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ နှစ်ဦးပေါင်းလျှင် HIVE Power4သန်းကျော် ရှိတယ်။ LEO ဝေလငါးများသည်လည်း အကောင်းဆုံး Post များအတွက် မဲပေးရန် စောင့်မျှော်နေကြသည်။
**Vote များအပြင် HIVE 1000 နှင့် LEO 500 ဆုများ စုစုပေါင်းရှိသည်။
ပထမနေရာ - HIVE 500 နှင့် LEO 250 ။
ဒုတိယနေရာ - HIVE 300 နှင့် LEO 150 ။
တတိယနေရာ - HIVE 200 နှင့် LEO 100 ။**
ဤစာမူကို ထုတ်ဝေပြီး ၁၀ ရက်အကြာတွင် ပဏာမခြေလှမ်း / ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းအတွက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်။ အနိုင်ရသူများကို ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အပြီးတွင် ကြေငြာပါမည်။
အသိုင်းအဝိုင်းခေါင်းဆောင်များသည် ဤပဏာမခြေလှမ်းကို သင်၏ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် သင့်ဘာသာစကားသို့ ကျေးဇူးပြု၍ ဘာသာပြန်ဆိုပေးကြပါ။ သင်၏ အကူအညီဖြင့် သင်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိပါလိမ့်မည်။ ဒီပဏာမခြေလှမ်းအဘို့, @hispapro က အဆိုပါ post ကို #Spanish ဘာသာပြန်ဖြင့် တင်ပါလိမ့်မည်။
အနာဂတ် အလားအလာများအတွက် ဤအကြံအစည်နှင့် ဆင်တူတာ ရှိပါသလား။ သင်၏အတွေးအခေါ်များ ကို သိစေရန် Twitter၊ Telegram သို့မဟုတ် Discord (eddiespino # 1698) ရှိ @eddiespino သို့ ဆက်သွယ်ပါ၊၊ သူသည် ကျွန်ုပ်အား ထပ်မံပြောကြားလိမ့်မည်။
အနာဂတ်အစီအစဉ်အတွက် @hiveangelists ကို Follow လုပ်ပေးပါ။
This post was translated by Burmese Language of the post of @theycallmedan .
Thank Theycallmedan and LeoFinance so much!
I will write my own post about FinancialGoals2021 soon.